ခေတ်ကြီးက သမီးမွေးထားလို့ စိတ်မချရရင် သားမွေးထားလို့ရော စိတ်ချရပြီထင်လား..? - Myannewsmedia
ခေတ်ကြီးက သမီးမွေးထားလို့ စိတ်မချရရင် သားမွေးထားလို့ရော စိတ်ချရပြီထင်လား..?
“Justice for Victoria” စာတမ်းတွေနဲ့အတူ နေပြည်တော်က အသက် ၃ နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ သမီးငယ်လေး Victoria လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်စော်ကားခဲ့မှု့ အတွက် တရားမျှတမှုရှိရေး အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့
သတင်းတွေ လူမှုကွန်ယက်ရဲ့ News Feed ဖွင့်တိုင်းမှာ တက်လာနေတာတွေ မြင်တွေ့ရတော့ သမီးမိန်းကလေး မွေးထားကြတဲ့ မိဘတွေ စိတ်ပူသောကတက်ကြရပြီပေါ့။
နည်းပညာတွေ အပြိုင်အဆိုင်ထွန်းကားတိုးတက်နေတဲ့ ယခုခေတ်ကြီးမှာ ခြောက်ခြားစရာကောင်းတဲ့ အခုလို အဖြစ်ဆိုး၊ အကျင့်ဆိုးတွေကို မကြုံစဖူး မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ကြားနေရတဲ့အတွက်
မိန်းကလေးတွေဆိုရင် ကြီးသည်ငယ်သည်မဟူ အရွယ်သုံးပါးမရွေး အချိန်အခါမလပ် အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးက မိဘတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ခိုင်ကျည်နေပါပြီ။
အခုလို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုတွေဟာ မိန်းကလေးတွေမှာ အဖြစ်များလို့ သားမွေးထားကြတဲ့ သားရှင် မိဘတွေကရော စိတ်ချရပြီလို့ ထင့်ပါသလား..?
ဆရာဝန်တစ်ဦး ပြန်လည်ရေးသားဝေမျှထားတဲ့ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်မှန် အကြောင်းလေးကို ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
“အမလေး လောကကြီးက သားမွေးထားလည်း ကြောက်စရာ”
တစ်ခါတလေမှာ ထင်မှတ်မထားတာတွေက တကယ်ကြီး ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီညနေကို ကျွန်တော် မေ့လို့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆နှစ်လောက်ကပါ။
“မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး”လို့ အော်ဟစ်နေတဲ့ မိဘနှစ်ပါး။
“မဖြစ်နိုင်တာတွေ မပြောပါနဲ့”လို့ ဒေါသတကြီး ရန်တွေ့နေတဲ့ အမျိုးသမီး။
သူတို့ မိသားစု အားလုံးက အဲဒီ ကိစ္စကို ခါးခါးသီးသီး ငြင်းဆန်ခဲ့ကြတယ်။
သူတို့မိသားစုနဲ့ ကျွန်တော် တွေ့ဆုံခဲ့ပုံက ရိုးရှင်းပါတယ်။
ကျွန်တော်က အချိန်ပိုင်း ဆေးခန်း စထိုင်နေတဲ့ ဆရာဝန်ပေါက်စပါ။ သူတို့လာပြကြတာ ဆယ်တန်းတက်နေတဲ့ သူတို့သားရဲ့ လက်နဲ့ ခြေထောက်က ယားနာဖုလေးတွေပါ။
ပြဿနာလား၊ စိတ်မကောင်းစရာလို့ပဲ ပြောရမလား၊ ဒီ ဝမ်းနည်းစရာ အဖြစ်အပျက်က အဲဒီအချိန်မှာ စတင်ခဲ့တာပါ။ ကလေးလေးက အသားဖြူဖြူ၊ အရပ်ရှည်ရှည်၊မျက်လုံးမျက်ခုံး ကောင်းကောင်းနဲ့ အတော်လေး ဖြူစင်ပြီး ကြည့်ကောင်းပါတယ်။
သူ့ရဲ့ လက်နဲ့ ခြေထောက်က ယားနာဖု အမည်းလေးတွေကို ကျွန်တော်က PPE (Pruritis Papular Eruptions )လို့ သံသယ ရှိပြီး သွေးစစ်ဖို့အတွက် မိဘနှစ်ပါးကို ဆွေးနွေးတော့ မိဘနှစ်ပါးစလုံးက ကျွန်တော့်ကို ရန်တွေ့ပါရော။
“လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကျွန်မတို့သားကို မျက်စိအောက်ကနေတောင် အပျောက်ခံတာ မဟုတ်ဘူး။ကျောင်းသွားရင် ကျောင်းအထိ လိုက်ပို့တယ်။
ထမင်းစားချိန် ကျောင်းပြင်ပကနေ စောင့်ကျွေးတယ်။ ညနေ ကျောင်းဆင်းတာနဲ့ အိမ်တန်းခေါ်လာတာ။ ကျူရှင်တောင် အများသူငှာနဲ့ ရောနှောမထားဘူး။ ဆရာ၊ဆရာမ အားလုံး အိမ်ပဲ ခေါ်သင်တာ”
ကလေးရဲ့ အဖေကတော့ ကျွန်တော့်ကို မကြည်သလို ကြည့်တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ မန္တလေးဆေးရုံ၊ဖျားနာဆောင်(၂)မှာ အလုပ်သင် ဆင်းခဲ့သူမို့ ကလေးရဲ့ လက်က ယားနာဖုတွေက PPE (Pruritis Papular Eruptions )ဆိုတာ သေချာသလောက်ပဲလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်နေပြန်တယ်။
“ကျွန်တော် ဆေးပေးလိုက်ရင် ယားနာတွေက သက်သာသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်ဗျာ ငှက်ဖျားဖြစ်နေတဲ့လူကို အဖျားကျဆေးပဲ တိုက်ပြီး ငှက်ဖျားဆေး မပေးဘဲ နေသလို ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်လို့ပါ။ သတိဆိုတာ ပိုတယ် မရှိပါဘူး။
မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။ ဟုတ်နေရင်တော့ ”
ကလေးရဲ့ အမေက ကျွန်တော့်စကားကို ဆုံးအောင် နားမထောင်ဘဲ
“အို..တွေးတောင် မတွေးရဲတဲ့ရောဂါပါ။ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး”
ကျွန်တော်တို့ စကားပြောနေချိန် ကလေးနဲ့ သူ့အဒေါ်က ဆေးခန်းအပြင်ဘက်မှာ စောင့်လို့နေပါတယ်။
ကလေးရဲ့ အဖေက ကလေးရဲ့ အမေကို တိုးတိုးတိုးတိုး ပြောတယ်။ ဖြစ်လာခဲ့ရင် ဆိုတဲ့ စကားသံ သဲ့သဲ့ ကို ကြားရတယ်။ ခဏအကြာ..
“ဆရာစစ်ခိုင်းတဲ့ HIV ရှိလာခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။ ကလေးရဲ့ ဘဝ ဆုံးပြီလား”
အဲဒီအချိန်က သွေးစစ်လို့ HIVတွေ့တာနဲ့ ပိုးထိန်းဆေး(ARVs)တွေ တန်းပေးတဲ့ အချိန် မဟုတ်သေးပါဘူး။ လူနာရဲ့ CD4 ကိုယ်ခံအား ကို အရင်စစ်၊ ၅၀၀ အောက်မှ ဆေးစပေးတဲ့ အချိန်ပါ။
“ရှိလာခဲ့ရင် ဒီရောဂါတွေကို သီးသန့်ကုပေးတဲ့ ခုခံကျကာလသားရောဂါဌာနကို ကျွန်တော် လွှဲပေးပါ့မယ်။ ဖြစ်လာရင် ဘဝမှာ ရွေးချယ်စရာ တစ်ခုပဲ ရှိတယ်။
အမြစ်ပြတ်စေတဲ့ ဆေးတွေ မပေါ်သေးတာမို့ ပိုးထိန်းဆေးတွေ သောက်ပြီး သက်တမ်းစေ့နီးပါး ကျန်းမာစွာ နေဖို့ပါပဲ”
ကျွန်တော်နဲ့ သူတို့ ဒီရောဂါအကြောင်း အများကြီး ဆွေးနွေး ဖြစ်ကြတယ်။ ဒီရောဂါမှာ အဆင့် လေးဆင့်ရှိကြောင်း၊ ဒီရောဂါက လိင်ဆက်ဆံတာ၊ ရောဂါပိုးပါတဲ့ သွေးသွင်းမိတာ၊ ရောဂါပိုးရှိသူနဲ့ အပ်အတူ မျှဝေသုံးစွဲတာ၊ရောဂါပိုးရှိတဲ့မိခင်ကနေ ကလေးကို
ကူးတာကနေသာ အဓိက ကူးကြောင်း၊ အတူနေ၊အတူစား ရေချိုးခန်း အိမ်သာ အတူသုံးတာတွေကနေ မကူးနိုင်ကြောင်း တွေ အများကြီး ပြောပြီး သွေးစစ်ဖို့ အတွက် အမျိုးသား ကျန်းမာရေး ဓာတ်ခွဲခန်းကို လွှတ်ရတယ်။
ကျွန်တော်ထင်တဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ကလေးရဲ့ သွေးထဲမှာ HIV ပိုး ရှိတယ် လို့ အဖြေထွက်ခဲ့တယ်။ ကလေးရဲ့ မိဘတွေ ငိုကြတယ်။ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ ဆွေးနွေးထားပေမယ့် ‘ဘာလုပ်ရမလဲဆရာ ဘာလုပ်ရမလဲ ဆရာ’လို့ ပြောပြီး ငိုကြတယ်။ ကျွန်တော် စဉ်းစား မိတာက HIV ပိုးဝင်ပြီး ဒီအဆင့် ၂ ရောက်ဖို့က နှစ်ချီပြီး ကြာတာ ယျေဘုယျအားဖြင့် ၅ နှစ်၈ နှစ်လောက် အထိကို ကြာနိုင်တာ။
ကလေးငယ်ရဲ့ မိဘတွေမှာသာ ဒီရောဂါရှိပြီး သူ့ကို မွေးကတည်းက ကူးခဲ့တာဆိုရင် ဒီကလေးက ART မသောက်ဘဲ ဒီအရွယ်ထိ ရောက် မလာနိုင်ဘူး။ ရှားရှားပါးပါး ရောက်လာခဲ့ရင်ကော ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ကလေးရဲ့ မိဘတွေကိုပါ သွေးစစ်ခိုင်းတော့ ရောဂါက ရှိမနေခဲ့ဘူး။
ဒီရောဂါ ကလေးဆီကို ဘယ်ကနေ ကူးခဲ့လဲ ဆိုတာ သိဖို့ ရောဂါရာဇဝင်တွေ မေးရတော့မယ်။ အဓိက ဖြစ်နိုင်တဲ့ သွေးသွင်းတာလည်း မလုပ်ခဲ့ဖူးဘူး။ မူးယစ်ဆေးလည်း မသုံးခဲ့ဖူးဘူးဆိုတော့ လိင်ကိစ္စသာ ကျန်တော့တယ်။ ကလေးရဲ့ အမေက ကလေးကို ချော့မော့ပြီး မေးတဲ့ အခါ ကျွန်တော်တို့ လုံးဝ မထင်ထားတဲ့ အဖြစ်အပျက် တစ်ခုကို သိခဲ့ရတယ်။
အိမ်ကို ကျူရှင်ခေါ်သင်တဲ့ ဆရာက ကလေးရဲ့ အဂါင်္ကို ပါးစပ်နဲ့ စုပ်သလို သူ့စအိုထဲလည်း မကြာခဏ ထိုးသွင်းခိုင်းကြောင်း သိရတယ်။ မိဘတွေကို ပြန်မပြောရဘူးလို့လည်း ပြောထားတယ်တဲ့။
ကြားစက မယုံကြည်နိုင်ခြင်းနဲ့ အတူ ဒေါသထွက်လိုက်တာ။ သူတို့ အိမ်က သုံးထပ်တိုက် အကျယ်ကြီးလို့ သိရတယ်။ စာသင်တာက တတိယအထပ်မှာ သီးသန့်လုပ်ပေးထားတယ်လို့ သိရတယ်။ စိတ်မထိန်းနိုင်ကြရင်
ဝါးလုံးရှည်နဲ့တော့ ဒီ professional ကို မရမ်းစေချင်ပါဘူး။ လူယုတ်မာတွေကတော့ အသိုင်းအဝိုင်းမျိုးစုံ၊ professional မျိုးစုံမှာ စုန်းပြူးအဖြစ် ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အဲဒီဆရာ အကြောင်းကို စုံစမ်းခိုင်းတော့ မနှစ်ကပဲ ဆုံးသွားပြီလို့ သိရပြန်တယ်။ ငိုယိုနေတဲ့ မိဘနဲ့ အဒေါ်ဖြစ်သူကို အားပေးစကားဆိုပြီး ခုခံကျ/ကာလသားဌာနဆီကို လွှဲစာရေးပေးရတယ်။
သူယုတ်မာတစ်ယောက်ကြောင့် လူကောင်းတွေပါ အနေကျပ်တာမျိုးတွေ မဖြစ်စေချင်ဘူး။
ငါးခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံးလည်း အပုပ် မခံနိုင်ဘူး။
သူတော်ကောင်း ဆရာ၊ဆရာမတွေရဲ့ လက်မှာ ကြီးပြင်း၊ ပညာနို့ရည်သောက်သုံးခဲ့သူမို့ ဒီလိုမျိုးတွေ ကိုယ်တိုင် မကြုံရရင် မယုံနိုင်ဘူး။
ဒီလိုစာတွေကြောင့် ယုန်ထင်ကြောင်ထင်တွေ မဖြစ်စေချင်ခဲ့လို့ မရေးခဲ့ပေမယ့်
နေပြည်တော်က ကလေးအဖေရဲ့ ရင်ဖွင့်စကားသံ ဖတ်ပြီးတာနဲ့ ဒီစာ ကို တန်းရေး ဖြစ်လိုက်တယ်။
Credit − ဟမ်စိုင်း(ဆေး-မန်း)
Previous post သမီးလေး Victoria ရဲ့ အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး CID ကို အချက်ကျကျ မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ သက္ကမိုးညို
Next post မင်္ဂလာဆောင်ရင် လက်ဖွဲ့ငွေတွေ အများကြီး လိုချင်တယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့ အေးမြတ်သူ